Kismaayo News » Turkiga oo soo saaray dufcadii ugu horaysay
Turkiga oo soo saaray dufcadii ugu horaysay
Kn: Xarunta tababarrada ciidanka ee Turkigu ka hirgaliyay Muqdisho ayaa maanta soo saartay dufcaddii ugu horaysay oo ciidamada lugta ah. Ciidanka ayaa ah ciidankii Iskudhafka ahaa ee ugu horeeyay ee caasimadda qaranka Muqdisho lagu xareeyo.
Madaxweyne Farmaajo oo ka qayb galay xafladda qalinjabinta ciidankan ayaa kula dardaarmay inay dalkooda si daacad ah ugu adeegaan, kana difaacaan cadowga qarsoon iyo midka dibad yaalka ah. Madaxweynaha oo u muuqday inuu u duurxulayo dalalka aan ku faraxsanayn saldhigga tababarka ciidanka ee Turkigu Muqdisho ka hirgaliyay ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay dal madaxbanaan oo xor ah isla mar ahaantaana aysan cidna u tilmaami karin dalka at la macaamilayaan iyo kaysan la macaamilayn. Wuxuuna yiri “dal kasta oon u aragno inay ku jirto maslaxada dadkeena waan la saaxiibaynaa, cidnana ka yeeli mayno inay noo tilmaanto.”
Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa goobjoog ahaa, waxayna ciidamadu soo bandhigeen dhoolatus ku aadan tababarka ay qaateen intii ay goobta ku xaraysnaayeen. Wali dalka kuma soo noqon dhawr boqol oo dawladda Turkigu dalkeeda ku soo tababarayso qaab saraakiil hogaamineed, ayadoo ay jiraan tobaneeyo kale oo ay u soo tababarayaan dhinaca duulinta diyaaradaha dagaalka.
Turkigu dhankiisa waa la dadaalayaa Soomaalida, laakiin su’aashu waxay tahay ciidamadani maka duwanaan doonaan kumannaankii kale ee Imaaraadka, AMISON iyo Isbahaysiga Yurub tababareen ee badankood duurka galay.